Tsy nahita azy aho; ary nolazain’ny olona tompon-tany fa tsy nisy vehivavy janga teo. Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho. Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao? Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao. Hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitrao azy?
Nahoana no tezitra ianao? Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Lea no anaran’ny zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny. Tafahaona tamin’i Esao rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy. Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Hanody anao anie ny fahoriako; fa efa nomeko ho andefimandrinao ny mpanompovaviko, ary nony hitany fa efa manan’anaka izy, dia na-taony toy ny tsinontsinona aho; Jehovah anie hitsara ahy sy ianao.
Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Tsy ahy izany; Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan’i Farao.
Indro, ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Hanody anao anie ny fahoriako; fa efa nomeko ho andefimandrinao ny mpanompovaviko, ary nony hitany fa efa manan’anaka izy, dia bauboly toy ny tsinontsinona aho; Jehovah anie hitsara ahy sy ianao.
Ary hoy izy telo lahy: Raha izao, nahoana re aho no dia mbola velona?
Ny lehilahy izay naiboly no nananako anaka; ary hoy koa izy: Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao.
Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo malagasg zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny.
Miverena any amin’ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Tsy mba handringana Aho noho ny folo.
Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Egypta ka hatrany amin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia pdd Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy baaiboly Girgasita ary ny Jebosita. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano.
Ho voaozona anie izay rehetra manozona anao, ary hohasoavina anie izay manisy soa anao. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao.
Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko vaiboly vidin’ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin’ny vadiko.
Aoka ho lasany ho azy, fandrao ho afa-baraka isika; indro, efa nampanateriko ity zanak’osy ity, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy. Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao.
Izao no ataovy, dia ho velona ianareo; fa izaho matahotra an’Andriamanitra: Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Anay ny rano; ary ny anaran’ny lavaka fantsakana dia nataon’Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo.
Hampionona ny hatezerany aho amin’ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia aminy baaiboly. Fa izao dia efa nanao adaladala ianao.
Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky ny tanàna.
Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra. Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Baiboyl zanak’osy avy amin’ny ondry aman’osy aho. Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao?